कक्षा छ विज्ञान हावा (Air) पाठका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर
1) वायुमण्डल भनेको के हो?
=> पृथ्वीको वरिपरि रहेको हावाको बाक्लो तहलाई वायुमण्डल भनिन्छ।
2) हावामा भएका प्रमुख ग्यासहरु के के हु?
=> हावामा भएका प्रमुख ग्यासहरु:-
i) नाइट्रोजन – 78.08 %
ii) अक्सिजन – 20.95 %
iii) आर्गन – 0.93 %
iv) Co2 – 0.036 %
v) हाइड्रोजन – 0.00005 %
vi) ओजोन – 0.000004 %
vii) अन्य – 0.003945 %
3) हावा भनेको के हो?
=> विभिन्न ग्यासहरुको मिश्रणलाई हावा भनिन्छ।
4) हावा विभिन्न ग्यासहरुको मिश्रण हो भनी सिद्ध गर्ने वैज्ञानिक को हुन? उनले कहिले यो कुरा सिद्ध गरेका हुन्?
=> हावा विभिन्न ग्यासहरुको मिश्रण हो भनी सिद्ध गर्ने वैज्ञानिक फ्रान्सका Lavoisier हुन्। उनले सन् 1775 मा यो कुरा सिद्ध गरेका हुन्।
5) हावामा अक्सिजन हुन्छ भन्ने कुरा कसरी सिद्ध गर्न सकिन्छ?
=> एउटा सानो प्लेटमा मैनबत्ती राखेर त्यसलाई पानी भएको अर्को भाँडोमा राखी बेलजारले छोप्न। बेलजारको पानीको सतहमा चिन्ह लगाइ मैनबत्ती बाल्ने र बेलजारको मुख बन्द गर्ने। केहिबेर मैनबत्ती पहेँलो ज्वाला सहित बलेर निभ्छ र बेलजारको ग्यास सेलाउँछ। त्यसपछि पानीको सतह बिस्तारै माथि चढ्छ। हावामा भएको अक्सिजन मैनबत्ती बल्दा प्रयोग भयो। जसले गर्दा हावाको आयतन घट्यो र पानीको लेभल 1/5th ले माथि चढ्यो। यसबाट हावामा अक्सिजन हुन्छ भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ।
6) हावामा कार्बनडाइअक्साइड ग्यास हुन्छ भन्ने कुरा कसरी सिद्ध गर्न सकिन्छ?
=> एउटा गिलासमा चुनपानी लिने। एउटा मसिनो नली (Delivery Tube) चुनपानी भएको गिलासमा राखी केहिबेर मुखले फुक्ने। चुनपानी दुधिलो देखिन्छ। मुखबाट निस्केको कार्बनडाइअक्साइड ग्यासले गर्दा चुनपानी दुधिलो भएको हो। हामिले श्वास फेर्दा फ्याकिएको कार्बनडाइअक्साइड ग्यास हावामा मिसिएको हुन्छ। यसबाट हावामा कार्बनडाइअक्साइड ग्यास हुन्छ भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ।
7) हावामा पानीको बाफ हुन्छ भन्ने कुरा कसरी सिद्ध गर्न सकिन्छ?
=> एउटा स्टिलको गिलासमा आधा पानी र केहि बरफका टुक्रा राख्ने। केहि बेरमानै गिलासको बाहिरी सतहमा पानीका थोपाहरु देखिन्छन्। यी थोपाहरु हावामा भएको पानीको बाफ चिसिएर बनेका हुन्। यसबाट हावामा पानीको बाफ हुन्छ भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ।
8) हावाको तौल हुन्छ भन्ने कुरा कसरी सिद्ध गर्न सकिन्छ?
=> एउटा बेलुन लिने र त्यसको तौल नाप्ने। अब हावा भर्ने र पुनः तौल नाप्ने। बेलुनको तौल पहिले भन्दा बढी भयो। बढी तौल बेलुनमा भरेको हावाको ह। यसबाट हावाको तौल हुन्छ भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ।
9) फलाममा खिया कसरी लाग्छ?
=> फलामलाई आद्र हावा वा पानीमा राखियो भने हावामा भएको अक्सिजनसँग बिस्तारै प्रतिक्रिया गरि खिया लाग्छ।
10) हावाका कुनै7गुण लेख्नुहोस्।
=> i) हावा विभिन्न ग्यासहरुको मिश्रण हो।
=> ii) हावाको तौल हुन्छ।
=> iii) हावाको रङ, गन्ध र स्वाद हुदैन।
=> iv) हावा एक स्थान देखि अर्को स्थान सम्म प्रवाह हुन्छ।
=> v) हावामा भएको अक्सिजनले गर्दा वस्तु बल्छ।
=> vi) हावामा भएको अक्सिजनले गर्दा फलाममा खिया लाग्छ।
=> vii) हावाको निश्चित आयतन हुदैन, त्यसैले हावा कोच्चिएर रहन सक्छ।
11) नाइट्रोजन ग्यासको उपयोगिता लेख्नुहोस्।
=> i) बोटबिरुवामा क्लोरोफिल बनाउन नाइट्रोजनले मद्दत गर्छ।
=> ii) बोटबिरुवाको तीव्र वृद्धि र बिकासमा नाइट्रोजनले मद्दत गर्छ।
=> iii) सवै प्राणीहरुले प्रोटिन बनाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हावामा रहेको नाइट्रोजन प्रयोग गर्छन्।
=> iv) फिलामेन्टलाई जल्नबाट रोक्न बिजुलीको बल्ब भित्र नाइट्रोजन ग्यास भरिन्छ।
=> v) प्याकेटका खानेकुरा बिग्रनबाट बचाउन प्याकेटमा नाइट्रोजन ग्यास भरिन्छ।
12) अक्सिजन ग्यासको उपयोगिता लेख्नुहोस्।
=> i) वस्तुहरु बल्नका लागि अक्सिजनले मद्दत गर्छ।
=> ii) श्वासप्रश्वास क्रियाका लागि सवै जीवहरु अक्सिजन प्रयोग गर्छन्।
=> iii) निमोनिया वा श्वासप्रश्वासमा कठिन भएका बिरामीहरुलाई कृत्रिम श्वासप्रश्वासका लागि अक्सिजन उपयोग गरिन्छ।
=> iv) ग्लुकोजसँग प्रतिक्रिया गरी शरीरमा शक्ति उत्पादन गर्न अक्सिजनले मद्दत गर्छ।
=> v) वेल्डिङ्ग (Welding) कार्यमा हाइड्रोजन र अक्सिजन बल्दा निस्कने Oxy-hydrogen flame प्रयोग गरिन्छ।
13) कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको उपयोगिता लेख्नुहोस्।
=> i) प्रकाश संश्लेषण क्रियाको लागि हरिया वनस्पतिहरु यो ग्यास प्रयोग गर्छन्।
=> ii) आगो निभाउने कार्यमा यो ग्यास प्रयोग गरिन्छ।
=> iii) सोडापानी, बियर, कोकाकोला आदि पेय पदार्थहरु बनाउन यो ग्यास प्रयोग गरिन्छ।
=> iv) युरिया मल उत्पादन गर्न र लुगा धुने सोडा बनाउन यो ग्यास प्रयोग गरिन्छ।
14) आद्रता भनेको के हो?
=> हावामा रहेको पानीको बाफको मात्रालाई आद्रता भनिन्छ।
15) हावामा रहेको पानीको बाफको उपयोगिता लेख्नुहोस्।
=> i) यसले फलफुल तथा तरकारीहरुलाई ताजा र रसिलो राख्न मद्दत गर्छ।
=> ii) बिरुवाको पातलाई सुख्खा हुन वा ओइलिनबाट बचाउँछ।
=> iii) जनावरको शरीरलाई सुख्खा हुनबाट बचाउँछ।
16) बिहानी पख शीतको थोपा देखिन्छ, किन?
=> हावामा भएको जलवाष्प चिसिएर बिहानी पख बोट बिरुवा र चौरमा शीतको थोपा देखिन्छ।
Previous Postकेही उपयोगी रसायनहरु (Some Useful Chemicals)
Next Postधातु र अधातु (Metal and Non-Metal)
जीवहरु (Living Beings)